Na dia latsaky ny 5 metatra toradroa aza ny trano fandroana, dia sarotra ny manasaraka ahy sy ny maina.
Home / Blog / Na dia latsaky ny 5 metatra toradroa aza ny trano fandroana, dia sarotra ny manasaraka ahy sy ny maina.
2021 / 01 / 15 FisokajianaBlog 5677 0
Sekoly fandraharahana amin'ny trano fidiovana 2020-11-17
Na dia latsaky ny 5 metatra toradroa aza ny trano fandroana dia tsy sarotra ny mandresy ahy ny partition mando sy maina!
Androany aho manome anao aingam-panahy haingon-trano, mamita ny raharaha ravaky ny fandroana!
Fizarana.1 Black Glass Aluminium
Jereo aloha ity fampiasana indroa an'ny sinko ity, nefa koa misy fitaratra roa, afaka mifanena amin'ny olona roa miaraka. Fisarahana mando sy maina mampiasa fizara vita amin'ny alimo mainty, marobe sy kanto.
Tsotra sy malama ny tsipika, ary tsy misy fahatsapana fanitarana ao amin'ny efitrano fidiovana kely.
Alohan'ny hametrahana ny fizarazarana dia tadidio fa ny fametrahana ny gorodona koa dia tena ilaina mba hisorohana ny fikorianan'ny rano.
Namboarina ho toy ny efitrano fandraisam-bahiny, tena malalaka, telo-lafiny fahatsapana, hahatratra ny tsara lena sy maina vokany.
Fizarana.2 Glass vera
Ity efitrano fandroana ity dia quadrilatera tsy ara-dalàna. Ny fandroana sy ny fandroana mitambatra ao anaty iray, mba hisorohana ny fiparitahan'ny rano, dia nampiasa ny fizara-pasika.
Ny fomba fizarazarana mitovy dia ampiasaina.
Ny fitaratra manjelanjelatra no tena manasongadina ny fandroana, mahatonga ity faritra ity ho kely monoton.
Ny fitaratra tsy misy rafitra sy ny vera tsy misy rafitra dia mandeha tsara.
Ny efitrano fandroana miloko matevina dia kanto.
Mahatsapa ny hakanton'ilay endrika.
Fizarana.3 Fanasarahana ny rindrina
Ny fizara-rindrina eo anelanelan'ny faritra mandro sy ny faritra fanasan-damba dia matanjaka sy tsara tarehy.
Ny fizarazaran'ny rindrina dia mahatonga ny faritra roa amin'ny habaka iray tsy miankina sy malalaka kokoa.
Previous :: Tonga ny ririnina! Tokony hividy kojakoja fandroana thermietika ve aho? Henoy Ireo manam-pahaizana, tsy mahagaga raha maro ny olona te hiova !!! Next: Ao amin'ny efitrano fandroana Japoney, ny kabinetra lamba famaohana dia manify hatramin'ny 10 santimetatra, mitahiry tsara
2021 / 01 / 11 7419
Ahoana no hatao raha voasakana indray ilay orana? Aza maika! Ampiasao handrahoana ... ...